सक्किगोनीका सागर लम्साल ‘बले’को आज जन्मदिन, प्रेमिकासँगको विबाहको छिनोफानो जन्मदिनमा लगाउँदैछन् ? – Gazabkonews
सक्किगोनीका सागर लम्साल ‘बले’को आज जन्मदिन, प्रेमिकासँगको विबाहको छिनोफानो जन्मदिनमा लगाउँदैछन् ?
काठमाडौ । स्यागंजाका सागर लम्साल ‘बले’ पछिल्लो पुस्ताका लोकप्रिय हाँस्यकलाकार हुन् । हाँस्यशृखला भद्रगोलबाट चर्चामा आएका ‘बले’ पछिल्लो समय सक्किगोनीमा आफ्नो कलात्मक अभिनय मार्फत दर्शकलाई हँसाइरहेका छन् । उनै बलेको आज जन्मदिन परेको छ ।
जन्मदिनको अवसरमा उनलाई बिहानैदेखि आफन्त, साथीभाई र शुभपचन्तकले शुभकामना दिइरहेका छन् । हाँस्य शृखलाका अलावा म्युजिक भिडियो र चलचित्रमा पनि ब्यस्त बले पछिल्लो प्रेमका कारण पनि चर्चामा छन् ।
रिल लाइफमा मुन्नीको प्रेममा परेका बले फेरी अर्की सुन्दरीको प्रेममा परेको खबरले चर्चा पाएको छ । टिकटकबाट भाइरल बनेकी प्रिज्मा खतिवडासँग सागर लम्साल बलेको गहिरो प्रेम सम्बन्ध रहेको समाचार पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । यो जोडीको विबाहको पनि चर्चा चलेको छ ।
झापा पुगेर होटलमा भेटे पारसले हिमानीलाई ? धेरै पछिको भेटमा के भयो ?
काठमाडौ । पूर्वयुवराज पारस शाह र पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहबीच लामो समयपछि भेट भएको छ । लामो समयदेखि टाढा रहेका यि दम्पत्तीबिच झापाको होटल मेची क्राउनमा पूर्वयुवराज दम्पत्तीबीच भेट भएको हो।
आमा कोमल शाहको ७१ औं जन्मोत्सवको अवसरमा आमालाई शुभकामना दिन पुगेका पारसले सोही अवसरमा पत्नि हिमानीलाई भेट्ने अवसर पाएका हुन् । जन्मोत्सवका अवसरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको परिवारले झापाको धुलाबारीस्थित मेची क्राउन होटेल एक साताका लागि बुक गरेको थियो ।
यसअघि पारसबाहेक राजपरिवारका सदस्य जन्मोत्सवमा सहभागी हुने बताइए पनि पोखरामा रमाउँदै गरेका उनी एकाएक मेची क्राउनमा पुगेपछि परिवारसँग लामो समयपछि यसरी भेटघाटको अवसर जुरेको बताइएको छ ।
बेलायती राजदरबार बकिङ्घम दरबारले अहिलेसम्म विचाराधीन अवस्थामै राखेको उहाँहरुको मान पदवी खारेज भएको घोषणा गरेपछि यसलाई बेलायती राजसंस्थाको इतिहासमा अविस्मरणीय घटनाको रूपमा लिइएको छ ।महारानी एलिजावेथ द्वितीयले ह्यारी दम्पत्तिसँग बेलायती राजपरिवारको अव राजनीतिक तथा सार्वजनिक सम्वन्ध नरहेको उल्लेख गर्नुभएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।राजपरिवारको सदस्यका रूपमा उहाँहरूको अव कुनै जिम्मेवारी, दायित्व र अधिकार तथा भूमिका पनि नहुने दरबारले जनाएको छ ।